3 ịmata ihe banyere Northern ọkụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe ole na ole dị egwu ma dị ịtụnanya karịa ịlele aurora borealis na mbara igwe na ọ bụ ndị ahụ nwere obi ụtọ ịtụgharị uche na otu, Ha na-ekwu maka ahụmịhe pụrụ iche na nke a na-agaghị echefu echefu nke enweghị ike iji ya tụnyere ihe ọ bụla a hụrụ ugbu a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere Ugwu Northern, lezienụ anya nke ọma n'ihi na mgbe ahụ a ga m agwa gị ụfọdụ mmasi banyere ihe ịtụnanya a na ị ghaghị ịhụ otu ugboro na ndụ gị.
1 Enwere ọkụ ugwu na mbara ala ndị ọzọ
2 Ha na-esekarị ese foto na ese foto
3 Enwere ike ịhụ ha site na mbara igwe
Enwere ọkụ ugwu na mbara ala ndị ọzọ
Ọ bụghị naanị na mbara igwe ka ugwu ugwu dị na mbara ụwa ebe ọ bụ na nchọpụta mbara igwe dị iche iche egosiwo ihe oyiyi nke auroras na mbara ala Jupiter na Saturn. Auroras dị na mbara ala ndị a dị egwu ma buru ibu karịa ụwa n'ihi na ndọta magnet na mbara ala ndị a siri ike ma sie ike karịa ụwa.
Ha na-esekarị ese foto na ese foto
Anya mmadụ enweghị ike ịchọpụta ịma mma nke ọkụ ebe ugwu, Agbanyeghị, kamera ahụ na-enye ohere ịse foto iji hụ ọmarịcha ọdịdị nke auroras ndị a. Igwe onyonyo ndị ahụ gosipụtara ogologo ya na mbara igwe doro anya na nke gbara ọchịchịrị na-enyere aka ịhụ ọkụ ugwu dị na ịma mma ha niile.
Enwere ike ịhụ ha site na mbara igwe
Egosiputala na enwere ike ihu ugwu ohuru site na mbara elu. Ndị na-agụ kpakpando na Satellites nwere ike isi na mbara igwe were ihe eserese gosi oke ọkụ ọkụ ugwu. Ọ bụrụ na ha ewere ọnọdụ na mpaghara gbara ọchịchịrị nke ụwa, foto ndị ahụ na-abụkarị ọmarịcha ma bụrụ ọmarịcha.
Ndị a bụ ọchịchọ ịmata ihe atọ ịchọrọ iburu n'uche gbasara ọkụ ugwu, ezi ihe nlere anya nke ndi mmadu nwere obi uto n'uwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » 3 ịmata ihe banyere Northern Light